Ny Ocean Ocean dia ho flagship an'ny HTC amin'ity 2017 | Vaovao momba ny gadget
Alakamisy lasa teo HTC dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny HTC U Ultra vaovao izay nahasarika antsika rehetra tamin'ny famolavolana tamim-pitandremana ary nanaitra anay ny sasany tamin'ny endriny sy ny mombamomba azy, na dia somary fohy ihany aza ny maha-lohataona amin'ity taona 2017 ity. Ny tsy fantatray dia ny orinasa Taiwanese manana fitaovana bebe kokoa ao amin'ny efitrano fandriana, ao anatin'izany ny ny HTC Ocean izay ho tena havoakan'ny orinasa amin'ity taona ity.
Ity anarana ity dia ilay iray voafaritra izay ahatongavan'ity fitaovana ity eny an-tsena, amin'ny daty izay mbola tsy fantatsika, na dia toa inona aza no toa azo antoka. tsy ho mpandimby ny HTC 10, araka ny fanamafisan'ny loharanom-baovao marobe akaikin'ny HTC.
Amin'izao fotoana ananan'ity fitaovana finday vaovao avy amin'ny orinasa Taiwanese ity dia tsy hainay tanteraka ny pitsopitsony, na dia heverina fa ho avy miaraka amina processeur ity Snapdragon 835, mba hitoviana amin'ireo terminal an'ny tsena antsoina hoe high-end ary hivoaka afaka herinandro sy volana ho avy.
Raha tsy misy fisalasalana, vaovao tsara fa ny HTC U Ultra dia tsy ho filohan'ny HTC amin'ny avo lenta, ary io dia tsy nantsoina tamin'ny tolona lehibe tahaka izany. Manantena aho fa ny HTC Ocean dia manana ny endrik'ilay fianakaviana natolotra vao haingana ary ambonin'izany rehetra izany dia misy andinindininy hatramin'ny asa mamela azy hiady amin'ireo fitaovana tsara indrindra eny an-tsena.
Mieritreritra ve ianao fa hahay handroso i HTC amin'ny famoahana ny Ranomasimbe HTC eny an-tsena na ny mifanohitra amin'izay aza dia handavaka kely kokoa ny fasany izy?. Lazao anay ny hevitrao amin'ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Ranomasimbe HTC dia ho lohandohan'ny HTC ho an'ny 2017
Ny LG G6 dia hampiditra haitao vaovao amin'ny fanaparitahana hafanana